Maxaad ku oran lahayd ninkii dilay hooyadaa? - BBC News Somali
Maxaad ku oran lahayd raggii dilay hooyadaa? miyaad cafin kartaa? Su'aalahani ayaa ahaa kuwii ka guuxayay Sarah Salsabila oo 17 jir ah oo bishii Oktoobar ee sanadkii hore booqatay xabsi ku yaal jasiirad ku taal Indonesia.
"Si lama filaan ah ayaa waxaan maqlay jug aad u culus oo mootada naga tuurtay," ayuu yiri Iwan oo xusuusanaya wixii maalintaasi dhacay.
Iwan ma ogeyn waxa dhacay ilaa goor dambe oo uu ogaaday in qarax ismiidaamin ah uu dhacay, kaa oo ay gaysatay kooxda xag jirka ah ee Islaamiga ah ee Jamaacah Islaamiyah, oo ah koox xagjiriin ah oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida. Kooxdan ayaa mas'uul ka ahayd weerarro isdaba joog ah oo ka dhacay dalkaasi Indonesia, oo ay ku jiraan qaraxyadii Bali ka dhacay sanadkii 2002 oo ay ku dhinteen 202 qof oo ka kala yimid daafaha dunida.
"Waxaan arkay oo kaliya dhiig. Dhiig aad u badan. Biro ayaa burburiyay mid ka mid ah indhahayga."
"Waxaa loola cararay qolka qalliinka ka dib markii ay foosha qabatay. Laakiin Ilaah baa mahad leh, si kastaba ha ahaatee waa ay umushay iyada oo aan qalliin galin," ayuu yir Iwan.
Xigashada Sawirka, IWAN SETIAWAN
"Hooyaday waxay ahayd qof adag," ayay tiri Sarah oo ah curudka Iwan iyo Halila. "In kasta oo lafaheedu ay burbureen, haddana waxaa u suurtagashay in ay qalliin la'aan umusho. Waxay ahayd qof adkeysi badan."
"Waxaan waayay saaxiibkeeyga ugu wanaagsan, lamaanaha naftayda, iyo qofkii i dhameystiray. Aad ayay iigu agad tahay inaan ka hadlo," ayuu Iwan.
"Waxaan rabay in la dilo shakhsiyaadkii falkaasi geystay ee ka badbaaday qaraxa, balse sidoo kale ma aanan doonayn in ay si dhakhso ah u dhintaan," ayuu yiri Iwad.
Waxaan doonayay in marka hore la jirdilo. Waxaan doonayay in haragga laga bixiyo iyaga oo nool oo milix lagu shubo jirkooga dhaawaca ahi, si ay u dareemaan xanuunka qarixii ay gaysteen"
Halkaasi ayay ahayd in ay kula kulmaan laba nin oo dil toogasho ah ku xukuman. Labadaasi nin ayaa lagu helay dambi ah in ay gaysteen qaraxaasi oo carruur badan waalid la'aan dhigay isla markaana kala geeyay lamaane is-jecel.
"Wadnaha ayaa I garaacmayay oo waxaan dareemayay dareen aad u qiiro badan. Ma tilmaami karayn wixii ka guuxayay maskaxdeyda," ayuu yiri Iwan.
"Waxaan rajaynayay uun in safarkani uu furi doono quluubta dadkii qaraxaasi fuliyay ee dadka laayay.
Muddadii ay doonta sii saarnaayeen, ayaa Sarah waxay ku mashquulsanayd taleefoonkeeda, waxayna iska qaadeysay sawirro balse mar la weydiiyay waxa ay isu mashquulinayso ayay ku jawaabtay "waxaan filayaa in kulankani uu fikir ku abuuri doono argagixisada oo ay Ilaah ka codsan doonaan facis. Haddii dabcan ay ka qoomamaynayaan wixii ay sameeyeen, waxaa suurtagal ah in arrintaasi ay saameyn ku yeelato kuwo kale, waxaannan rajaynayaa in arrintaa oo kale aysan mar dambe dhici doonin".
Rois waxa uu ku farxay xukunka maxkamadda oo ahaa dil toogasho ah, waxa uuna yiri "aad baan u faraxsanahay in dil la igu xukumo waayo waxaan dhimanayaa aniga oo ah shahiid. Sababtu waxay tahay, safaaradda Australia waxaa loo beegsaday taageerada milatari ee ay siiso Mareykanka oo dalka Ciraaq dagaal ka waday xilligaasi.
Iwan, Sarah iyo Risqi ayaa salaamay Rois, waxa ayna ku fariisteen kuraas caag ah oo meesha tiilay. Iwad ayaa hadalka billaabay oo yiri "carruurteydu waxay aad u danaynayaan in ay la kulmaan qofkii sababay in ay waayaan hooyadood islma markaana aabahood dhigay il la'aan."
Rois wuxuu weydiiyay Iwan halkii uu joogay markii uu qaraxaasi dhacayay. Iwan ayaa u sheegay in xaaskiisa oo uur la hayd iyo isaga ay ka mdi ahaayeen dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Wuxuu sidoo akle u sheegay in xaaskiisa ay habeenkaasi dhashay wiilkiisa Rizqi oo uu farta ugu fiiqay. Haseyeeshee Rois ayaa ku jawaabay sida tan "aniguna waxaan dhalay cannug. Muddo sanado ah ma aanan arag xaaskeyga iyo cannugeyga. Xaaladda ku haysata mid ka xun baan dareemayaa waayo adiga waxaa kula jooga carruurtaada. Anigu cannugayga xitaa ima yaqaan."
Rois wuxuu eegay Sarah iyo Rizqi oo gacmahooga eegaya, oo ka baqaya in toos ay u eegaa Rois. Sarah waxay Rois weydiisay sababta uu weerarkaasi u gaystay, wuxuuse ku jawaabay "Waad fahmi doontaa marka aad weynaatid. Anigu ma gaysan waxa ay igu eedeeyeen. Ma jirto sabab aan u qirto. Anigu raalli kama ahi in aan qayb ka noqdo weerar dadka ku dhimanaya ay yihiin Muslimiin. Sax ma ahan. Ma ahan in aad disho qof Muslim ah."
Rois waxaa kaligii hadda lagu hayaa qol gooni ah oo ku dhex yaal xabsigaasi. Iwad iyo carruurtiisa inta aysan tagin, ayaa Rois waxa uu dalbaday cafis, wuxuuna yiri "Bani'aadanka oo dhami waa ay khaldamaan. Haddii aan khalad kaa galay, fadlan icafi. Aad ayaan u dhibbanahay."
Markii bannaanka uu u baxay, Iwan, wuxuu dareemayay cii loo wuxuu lahaa "fursad ayaa I dhaaftay oo in aan ka aarsado ayay ahayd."
Iwan iyo carruurtiisa waxaa loo geeyay Axmad Xasan oo ah ninka labaad ee dhacdadaasi lala xiriirinayo. Iwan wuxuu Axmad u sheegay in halkan ay u yimaadeen si uu ula kulmo carruurtiisa oo uu dilay hooyadood. Waxa uu yiri "carruurteydu waxay doonayaan in ay ogaadaan sababta aad u dishay hooyadood isla markaana aad anigu indhaha ii tirtay."
Axmad wuxuu ku jawaabay "anigu ma doonayn in aan dhibaateeyo aabahiin. Meesha ayuu marayay balse saaxibkey oo qaraxa siday ayaa halkaa isku qarxiyay. Waxaan filayaa in aad iska key cafin doontaan."
Waxa uu sheegay in Ilaah uu qadaray in uu carruurtani la kulmo oo uu cafis weydiisto, maadaama sida uu sheegay uu yahay bani'aadam, khaladna uu gali karo.
"Isma celin kari, Sarah waxaan u arkaa in ay tahay gabadheyda. Fadlan, fadlan, fadlan iska key cafi. Cafiskeygu wuxuu ku jiraa gacantaada," ayuu yiri Axmad.
Iwan ayaa markii dambe sheegay in ereyada Axmad ay aad u taabteen dareenkiisa, wuxuuna yiri "Markii aan arkay Axmad oo ooynaya, ayaan ogaaday in uu ahaa nin fiican. Waxa uu dareemayaa xanuunka dadka kale ay dareemayaan. Waxaa laga yaabaa in dad xun ay duufsadeen, haatanse uu xaqiiqada ogaaday."
Sarah ayaa sheegaty in "Axmad uu u sheegay in uu ka xun yahay wixii dhacay. Waxaan ogaaday in qofku uu wax xun sameyn karo balse gadaal uu iska badali karo oo uu noqon karo qof fiican. Sidaa awgeed, anigu waan cafiyay. Hadda waan faraxsanahay waayo wixii aan waligey doonayay ayaan helay jawaabtooda oo hadda waan qancay," ayay tiri.